Waqtiga Ramadaanka iyo Muslimiinta Sweden | Somaliska
Saacadaha dheer ee xiliga xagaaga ayaa ka dhigaya ramadaanka Sweden mid aad u adag ayadoo gobolada khaarkood ay Muslimiintu soomayaan 18 saacadood ka badan. Waxaa la filayo in sanadka 2015 uu xitaa ka sii dheeraado saacadaha hada, ayadoo Ramadaanku la filayo in uu ku aado bisha Juun oo maalintu aad u dheertahay. Mikael Sundin oo ka mid ah gudiga Ururka Muslimiinta Umeå ayaa sheegay in ay saaid ugu sii adagtahay dadka ku nool waqooyiga Sweden. "Xitaa halkaan Stockholm ayaa saacadaha aad u dheer yihiin. Balse Musliiminta intooda badan waxay raacayaan waqtiga" ayuu u sheegay wargeyska The local. Imaamka masjidka Stockholm Mahmoud Khalfi ayaa yiri "wali waxaa jira Maalin iyo habeen sidaa darteed Muslimiinta waa in ay raacaan sharciga caadiga ah ee ramadaanka". Asagoo intaas ku daray in Muslimiinta Sweden ay saacadaha dheer ay sidoo kale heleen saacado gaaban marka ramadaanku ku soo aado Xiliga jiilaalka. Balse sanadaha soo socda ayaa la filayaa in Ramadaanku ku soo aado xiliga xagaaga oo xitaa ay macquul tahay in qaybo ka mid ah Sweden aysan qoraxdu ka dhicin ayadoo imaamku uu sheegay in ay Muslimiinta u furantahay in ay la qabsadaan waqtiga magaalada ugu dhow ee ay qoraxdu ka dhacdo. Imaamka ayaa intaas ku daray in Muslimiinta ku nool wadamada kulul ay sidoo kale haysato dhibaato, asagoo dadka faray in ay dulqaad sameeyaan.
Saacadaha dheer ee xiliga xagaaga ayaa ka dhigaya ramadaanka Sweden mid aad u adag ayadoo gobolada khaarkood ay Muslimiintu soomayaan 18 saacadood ka badan.
Waxaa la filayo in sanadka 2015 uu xitaa ka sii dheeraado saacadaha hada, ayadoo Ramadaanku la filayo in uu ku aado bisha Juun oo maalintu aad u dheertahay.
Mikael Sundin oo ka mid ah gudiga Ururka Muslimiinta Umeå ayaa sheegay in ay saaid ugu sii adagtahay dadka ku nool waqooyiga Sweden.
“Xitaa halkaan Stockholm ayaa saacadaha aad u dheer yihiin. Balse Musliiminta intooda badan waxay raacayaan waqtiga” ayuu u sheegay wargeyska The local.
Imaamka masjidka Stockholm Mahmoud Khalfi ayaa yiri “wali waxaa jira Maalin iyo habeen sidaa darteed Muslimiinta waa in ay raacaan sharciga caadiga ah ee ramadaanka”.
Asagoo intaas ku daray in Muslimiinta Sweden ay saacadaha dheer ay sidoo kale heleen saacado gaaban marka ramadaanku ku soo aado Xiliga jiilaalka.
Balse sanadaha soo socda ayaa la filayaa in Ramadaanku ku soo aado xiliga xagaaga oo xitaa ay macquul tahay in qaybo ka mid ah Sweden aysan qoraxdu ka dhicin ayadoo imaamku uu sheegay in ay Muslimiinta u furantahay in ay la qabsadaan waqtiga magaalada ugu dhow ee ay qoraxdu ka dhacdo.
Imaamka ayaa intaas ku daray in Muslimiinta ku nool wadamada kulul ay sidoo kale haysato dhibaato, asagoo dadka faray in ay dulqaad sameeyaan.